Mandritsara: hiady amin’ny kolikoly ny zandary | NewsMada
Mandritsara: hiady amin’ny kolikoly ny zandary
Anisan’ny fanamby napetraky ny zandarimariam-pirenena malagasy ny ady atao amin’ny kolikoly. Anton’izay, ny famerana ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vahana manerana ny Nosy. Torak’izany ny famerenan-kasina ny sampandraharam-panjakana manoloana ny filan’ny vahoaka. Tao anatin’ny vondron-toby Mandritsara sy Befandriana avaratra, any amin’ny Faritra Sofia, azo notsapain-tanana ny vokatra, tamin’izay ady natao hamongorana ny kolikoly izay. Raha ny fitsaram-bahoaka fotsiny izao, tranga iray no nisy nandritra ny taona 2018, raha nisy dimy izany, ny taona 2017. Tsy nisy ny olona voasambotra hatreto raha nahatratra 25 ny olona voarohirohy tamin’ny taon-dasa.
Tsy nisy ny zandary izay niharan’ny fanenjehana avy amin’ny mponina ao an-toerana noho ny fanaovana kolikoly, raha nisy fitoriana zandary tamin’ny 2017.
Marihina, fa ho an’ny Kaompania ao Mandritsara, misy ny fanentanana ataon’ny lehiben’ny Kaompania, ny Kaomanda Ramananga Norbert amin’ny vahoaka. Nahatratra 30 ny fitetezam-paritra natao, hanentanana ny mponina hiady amin’ny kolikoly.
“Tanjona dia ny mba hisian’ny fiarahamonina mirindra anaty filaminana sy fandriampahalemana. Marina fa sarotra, ary betsaka ny olona tsy faly amin’ny ady atao hamongorana ny kolikoly izany, saingy tsy ataontsika vato misakana akory izany. Izahay ato anivon’ny zandarimariam-pirenena manokana, izay tarihiko, dia tsy mikely aina manao izay tratra. Miasa ho an’ny tombontsoa iombonana izahay fa tsy sanatria natao hiaro tombontsoan’olom-bitsy”, hoy ity manamboninahitra ity nandritra ny resaka nifanaovana taminy.
“Amin’izao fotoana izao, tsy mikely aina izahay mitady ny fomba rehetra mba hitohizan’ny fifehezana ny fandriampahelamana ato amin’ny faritra. Nihena ny tahan’ny fandikan-dalàna ato Mandritsara sy Befandriana Avaratra rehefa ampy ny fanentanana ny mponina, sy rehefa tafapetraka ny fifampitokisana amin’ny vahoaka sy ny manampahefana”, hoy hatrany izy nanazava.
Fanamby mbola apetraky ny kaompanian’ny zandariamariam-pirenena ao Mandritsara rahateo ny hitohizan’ny fiaraha-miasa matotra amin’ny mpiantsehatra rehetra amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana any an-toerana.